Korneel Naasir Saalax Oo La Dilay. – Bogga Calamada.com
Korneel Naasir Saalax Oo La Dilay.
July 30, 2017 7:20 am Views: 262
Korneel sare oo ka tirsanaay saraakiisha maleeshiyaatka ay tababartay dowlada daba dhilifka ah ee Imaaraatka Carabta ayaa lagu dilay qeybo ka mid ah gobalka Abyan oo ah gobal dhaca dhanka Konfur Bari ee dalka Yemen.
Weerarka lagu dilay sarkaalkan waxa uu sigaar ah kaga dhacay deegaanka Lowdar oo ka tirsan gobalka Abyan kaasi oo lagu dilay howlgal gaar ah oo si weyn loo soo qorsheeyay.
Sarkaalkan la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Naasir Saalax Al-jacfari,waxaa howlgalka gaarka ah ee lagu dilay sarkaalkan fuliyay ciidamada Mujaahidiinta Ansaaru Shareecah ee ka dagaalama dalka Yemen.
Maalmo ka hor ayeey aheed markii ciidamada Mujaahidiinta Ansaaru Shareecah ee taabacsan Mujaahidiinta Al-qaacidah ee dhulka Jaziiratul Carab weerar kamiin ah ay ku dileen sarkaal sare oo lagu magacaabi jiray Saalim Cali Baamasduus oo ka mid ahaa saraakiisha maleeshiyaatka Calooshood u shaqeystayaasha Imaaraatka Carabta tababartay kaasi oo lala dilay labo askari oo ilaaladiisa gaarka ah ka mid aheed,iyadoona kamiinkaasi uu ka dhacay gobalka Xadra Mowt oo dhaca Bariga dalka Yemen.